Illustrators din Myanmar pentru angajare | Freelancer
Illustrators pentru angajare în Myanmar
Publicitate, Android, Canva, Comics, Content Creation
အရင်တုန်းက ငါ ဘဏ်မှာအလုပ်လုပ်တယ် ငွေအ သွင်းအထုပ်‌‌ ၊ ငွေလွှဲ စတဲ့များစွာ‌သော ဘဏ်စာရေးအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ် ။ အဲ့ဒီနောက် အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ လျော်ကြေးဌာနကို ပြောင်းပြီးလုပ်ကိုင်တယ် ။ ဒီအလုပ်ကတော့ အာမခံထားတဲ့ယာဉ်တွေရဲ့ လျော်ကြေးကိစ္စအတွက် ၎င်းယာဉ်မတော်တဆမှုတွေမှာ ထိခိုက်သွားတဲ့ အပျက်အဆီးတွေကို ချက်ချင်း... mai mult
အရင်တုန်းက ငါ ဘဏ်မှာအလုပ်လုပ်တယ် ငွေအ သွင်းအထုပ်‌‌ ၊ ငွေလွှဲ စတဲ့များစွာ‌သော ဘဏ်စာရေးအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ် ။ အဲ့ဒီနောက် အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ လျော်ကြေးဌာနကို ပြောင်းပြီးလုပ်ကိုင်တယ် ။ ဒီအလုပ်ကတော့ အာမခံထားတဲ့ယာဉ်တွေရဲ့ လျော်ကြေးကိစ္စအတွက် ၎င်းယာဉ်မတော်တဆမှုတွေမှာ ထိခိုက်သွားတဲ့ အပျက်အဆီးတွေကို ချက်ချင်း ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှတ်သားရင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးရတာမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့တယ် ။ ငါကသီတင်းပါတ်တစ်ပါတ်ကိုတစ်ရက် အဲ့ကိစ္စတွေမှာ (24)နာရီအပြည့်တာဝန်ယူရတယ် ။ ကျန်တဲ့အလုပ်ဖွင့်ရက်တွေမှာတော့ အဲ့တာဝန်‌တွေကိုပဲ ပုံမှန်ရုံးချိန်အတိုင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တယ် ။ အချိန်ပြည့်အလုပ်တွေမရခင် ဈေးကွက်သုတေသဏကုမ္ပဏီအတွက် ကွင်းဆင်းပြီးစစ်တမ်း‌ကောက်တာ ၊ ပုံဆွဲတာ ၊ ဆေးသုတ်တာ အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေကို အချိန်ပိုင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ် ။ ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ပြည့်အလုပ် အချိန်ပိုင်းအလုပ် အကုန်လုံးမှာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ရတဲ့တာဝန်‌ကိုကျေပွန်အောင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးပြီ ။ အခု ငါ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေတိုးလာဖို့အတွက် အိမ်မှာနေရင်းလုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အလုပ်အပ်လာတဲ့‌လူတစ်ချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ကိုင်နေတယ် ။ မင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆို ငါနဲ့ ညှိနှိုင်းကြည့်လို့ရတယ် ။ I'm beginner level in online freelance . But you can trust me Bro . Because i'd finished over 20 jobs like freelance drawing ( outline tattoo arts , painted many walls , sharing own graffiti , designing stencil picture , created postcards with cartoon characters , and drawn creative designs for screen printing factory ) in my community . mai puțin
Angajează pe YakazukeY